सज्जन र दुर्जन मान्छे – Chitwan Post
स्वभावका हिसाबले व्याख्या गर्दा संसारमा मान्छे केवल दुई प्रकारका छन्, एउटा सज्जन र अर्को दुर्जन । सज्जनलाई असल र खराबलाई दुर्जन भन्ने गरिएको छ । एउटै अर्थ लाग्ने यी शब्दहरुमध्ये सज्जन र दुर्जन पहिले पहिले प्रयोग गरिन्थ्यो, हिजोआज यिनै शब्दहरुको सट्टा असल र खराब भन्ने गरिएको छ ।
सज्जन मान्छे त्यो हो जसको दिमागमा सकारात्मक विचार फुल्छ, फल्छ र परिणाम पनि सकारात्मक दिन्छ । दुर्जन मान्छे त्यो हो जसको दिमागमा नकारात्मक दिमाग फुल्छ, फल्छ र परिणाम पनि नकारात्मक दिन्छ । सज्जन मान्छेले पहिले अरुलाई खान दिन्छ र पछिमात्र आफू खान्छ । सज्जनले अरु बाँचे म बाँच्छु भन्ने जानेको हुन्छ, यही ज्ञानका कारण उसले अरुलाई बचाउन हरदम कोसिस गरिरहन्छ ।
तर, दुर्जनले सबैभन्दा पहिले आफू खान्छ मात्र होइन, अरुलाई खान पनि दिँदैन र अरुले खान लागेको छ भने खोसेर खाइदिन्छ वा आफूले नखाए पनि खोसेर फालिदिन्छ । दुर्जनलाई अरु बाँचेकै कारण आफू बाँचेको छु भन्ने जानकारी भए वा नभए पनि आफूमात्रै बाँच्ने प्रयास गर्छ, अरुलाई बचाउनेतर्फ कहिल्यै लाग्दैन । सके अरुलाई मार्ला र सिध्याउला, तर बचाउनेतर्फ कहिल्यै सोच्दैन । सज्जन मान्छेले सज्जनलाई मन पराउँछ तर दुर्जनले फेरि दुर्जनलाई नै मन पराउँछ भन्ने होइन, दुर्जनले पनि आखिर सज्जनलाई नै मन पराउँछ । भलै, दुुर्जनको संगत सधैँभरि दुर्जनहरुसँगै हुन्छ । सज्जन होस् वा दुर्जन, यी दुवै भगवान्का उत्पादन भएको हुँदा भगवान्को चरित्र सज्जन र प्राणी हितकारी भएको हुँदा कर्मजति सबै नकारात्मक गरे पनि आखिर दुर्जनको मनको कुनामा सज्जनलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति लुकेको हुन्छ । यसो हुनुको कारण पनि सज्जन र दुर्जन दुवै भगवान्को उत्पादन भएकोले हो ।
शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भरतपुर ७, कृष्णपुर निवासी मुक्तिनाथ भण्डारी सज्जन र दुर्जनका बारे आफ्नो विचार यसरी व्यक्त गर्छन्– “सज्जनले दुर्जनलाई आफूजस्तै ठानी व्यवहार र संगत गर्छ भने दुर्जनबाट धोकामात्रै पाउँछ, दुर्जनले सज्जनलाई आफूजस्तै ठानेर व्यवहार गर्छ भने गज्जबले पछुताउँछ ।” उनको विचार कति सही वा गलत भन्ने पत्ता लगाउन कसी लगाउनुपर्छ । कसी लगाउने उपाय भनेको समाजमा यतिबेला रहेका मान्छेहरुका विचार र चालचलन कस्तो छ त्यो अनुसन्धान गर्दा पत्ता लगाउन सकिन्छ । एउटा पूजापाठमा रमाउने पण्डितले जाँडरक्सीमा रमाउने, जुवातासमा समय खेर फाल्ने मान्छेसँग संगत वा व्यवहार ग¥यो भने जाँडरक्सीमा रमाउनेले आफ्नो स्वभावअनुसार पण्डितलाई धोका नदिई छाड्दैन । पण्डितलाई रक्सी पिउन कर गर्छ । तास खेल्न जान प्रेरित गर्छ । नमान्दा कुट्न बेर लाउँदैन । कुनै खालको बाध्यताका बीच पण्डितले तास खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कल्पना नगरेको अवस्था सिर्जना भई पण्डितको मुखमा रक्सी पर्न पनि सक्छ । पण्डितले लामो समय खर्चेर कमाएको इज्जत खरानी हुन सक्छ । यसरी दुर्जनको संगत गर्दा सज्जन पण्डितलाई धोका हुन्छ भने यसैलाई अर्को कोणबाट व्याख्या गर्दा यदि त्यही जाँडरक्सी र जुवातासमा भुल्ने दुर्जनले सज्जन पण्डितलाई आफूजस्तै ठानेर व्यवहार गर्न खोज्यो भने पण्डितसँग भएको विद्वताको लाभ उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ र ऊ कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन । आखिरमा पण्डितलाई पनि आफूजस्तै मूर्ख र दुर्जन सम्झिँदा आफू सप्रिने मौका दुर्जनले गुमाउँछ र पछुताउँछ । आज नेपाली नागरिक समाजमा भएको पनि यस्तै छ । यसकारण, ती भण्डारीको विचार सोह्रै आना सही छ ।
अब फेरि तिनै भण्डारीले “आफ्नो धरातल”बारे बताएको कथा यस्तो छ– विधवा महिलाको एक छोरा थियो । धनीको घरमा काम गर्थिन् । धनीका सन्तान स्कुल जान्थे तर ती महिलाको बच्चो खर्चको अभावमा स्कुल जान पाएको थिएन, तर स्कुल जान रहर गथ्र्यो । एकदिन ती महिलाले घरवाला साहूलाई छोरो स्कुल जान रहर गरेको कुरा बताइन् । साहूले दैनिक ८ घन्टा काम गरिरहेकी महिलालाई दिनको १० घन्टा काम गर्ने सर्तमा तिनको छोरालाई स्कुल पठाउन राजी भए । सर्तअनुसार विधवा महिलाले साहूको घरमा दैनिक १० घन्टा काम गरेर छोरालाई पढाइन् । छोरो पढाइमा अब्बल देखा प¥यो । पढाइमा तेज छोरा पढ्दापढ्दै एकदिन इन्जिनियर बन्यो । जागिर पायो । धन कमायो । आफ्नै घर बनायो । आफ्नै पौरखले बिहे ग¥यो । थुप्रै कोठा भएको घरमा इन्जिनियरको परिवार सरे । इन्जिनियरका साथीहरुले मित्रको घर हेर्ने चाहना व्यक्त गरे । साथीहरुलाई इन्जिनियरले घर बोलाए । सबै कोठा भौतिक सामग्रीले झकिझकाउ थियो । साथीहरुले इन्जिनियर सुत्ने कोठामा पनि हेर्न चाहे । साथीहरुको बचनको पालना गर्दै इन्जिनियरले आफू सुत्ने कोठा देखाए । तर, अचम्म के थियो भने सबै कोठाहरु भौतिक सुविधाले सम्पन्न थिए तर इन्जिनियर सुत्ने कोठा अति सामान्य थियो । पहिला गरिब छँदा आमा र छोराले जस्तो खालको ओछ्यान प्रयोग गर्थे त्यस्तै थियो । साथीहरुले सबै कोठा झकिझकाउ छ, यो कोठाचाहिँ किन यति सामान्य ? भन्ने प्रश्न सोद्धा इन्जिनियरको जवाफ यस्तो थियो– “मेरो पहिलाको धरातल यही हो, यदि मैले मेरो आमाको पहिलाको दुख बिर्सें भने म गलत बाटोमा जानेछु, कहिल्यै आफ्नो धरातल बिर्सिन हुन्न ।”
वाह ! भूतपूर्व गरिब इन्जिनियर । कति असल नागरिक । जिन्दगीमा मान्छे धनका हिसाबले कहिले धनी हुन्छ त कहिले गरिब हुन्छ, तर आफ्नो वास्तविक धरातल बिर्सिनुहुन्न भन्ने कुरा कसरी जानेका होलान् । सायद् ती मेहनती आमाको रगतपसिनाको फल होला, ती इन्जिनियर जसले आमाको मान राखे । आफूले आफूलाई धनी भईकन कहिल्यै आफ्नो पुरानो दुःखलाई नबिर्सिने कसम खाए । तर दुर्भाग्य ! हिजोआज यो देशमा अचम्म भएको छ । अपवादलाई छाडेर सबका सबले आफ्नो पुरानो धरातल बिर्सिएका छन् । हिजो बिँडी खान नपाएर बिँडीको तलतलले पैसा नहुँदा मकैको खोस्टा बेरेर बिँडी आकारमा बेरेर सल्काउनेहरु आज सूर्य चुरोट सल्काउँछन् । हिजो बाको पालामा फाटेको कट्टु लाएर स्कुल जानेहरु आज कार चलाएर हिँडेका छन् । हिजो एकछाक चामलको भात खान पाउँदा खुसीले चार हात उफ्रिनेहरु आज भातको उरूङमा नाचेका छन् । बिँडीको सट्टा सूर्य चुरोट सेवन गर्न सक्नु राम्रो हो । हिजो कट्टु लाउन कठिन हुनेहरु आज कारमा चढ्नु धेरै राम्रो हो । एकछाक भात खान पाउँदा स्वर्ग पुगेर एक फन्को नाचेर धर्ती आएको सोच्नेहरु आज पेटभरि भात खान पाउनु गज्जब राम्रो कुरा हो, तर आफूभन्दा आज कमजोर सावितहरुलाई सीधा वा घुमाएर हेप्ने काम गर्नुचाहिँ आफ्नो धरातल बिर्सनु हो । आजका गरिब भोलि धनी हुन सक्छन् । आजका धनी कुनै कारणले भोलि गरिब हुन पनि सक्छन् । तर, जहाँसम्म सवाल आफूभन्दा कमजोरलाई आफ्नो पुरानो धरातल बिर्सिएर ङ्याँक्ने काम हो, यो भने बिल्कुल अपराध हो जुन काम भूतपूर्व गरिब वर्तमानका धनी ठानिएकाहरुले गरिरहेका छन् ।
मान्छे धनी हुनुपर्छ सही हो, तर भौतिक धनी होइन आध्यात्मिक धनी हुनुपर्छ । धनको धनीभन्दा संसारमा आज पनि विवेकका धनीहरुलाई पुजिन्छ, सम्मान गरिन्छ । भौतिक धन नाशवान् छ । सुनचाँदी, हीरामोती, कागजका पैसा वा धातुका पैसा सबै नाशवान् छन्, तर विवेक र ज्ञान अविनासी छन् । कहिल्यै नास हुँदैनन् । फेरि, मान्छेमा भएको ज्ञान र विवेकको बलमा मात्र मानवसंसार चल्न सक्छ, भौतिक धनले संसार चल्न सक्दैन । भौतिक धन दुर्जनलाई ज्यादा चाहिन्छ । निर्वाह धन सज्जनले उपभोग गर्छ, अर्थात् सज्जन मान्छे धनको पछाडि ज्यान छाडेर कुद्दैन । दुर्जनहरु धनको तागतमा बाँच्न चाहन्छन् । सज्जनहरु आफूसँग भएको भौतिक र अभौतिक दुवै खाले धन र ज्ञानको प्रयोगले अरुको सेवा गर्छन् भने दुर्जनहरु आफूसँग भएको धनको बलमा कमजोरलाई पछार्ने र ङ्याँक्ने गर्छन् ।
मानवसंसारमा खासगरी आजको कलियुगमा यही दुई खाले सज्जन र दुर्जनको उपस्थिति छ । सज्जनहरु दुर्जनसँग लड्न झैझगडा गर्न चाहन्नन्, तर दुर्जनहरु फोकटमा सज्जनसँग नाडी निमोठ्छन् । भगवान्को नियमअनुसार वा मान्छेले बनाएको मानवअधिकार भन्ने नियमले पनि सज्जनलाई दुर्जनसँग नाता गाँस्न वा संगत नगर्ने अधिकार हुनुपर्ने हो, तर दुर्जनहरु आफ्नो अनुहारलाई सस्तोसँग प्रस्तुत गर्छन् । दुर्जन त भित्रभित्र त्यसै जलेका छन् नै, सज्जनलाई समेत खुसीले बाँच्न दुर्जनहरुले दिँदैनन् । अब यहाँनेर गल्ती दुर्जनहरुको होइन, हुँदै होइन । यो गल्ती त सृष्टिकर्ता भगवान्को हो जसले सज्जन र दुर्जन दुवैलाई जन्माएका छन् । त्यसैले जे गर्छन् भगवान् उनैले गर्छन् । हामीले त भन्ने यही हो– सज्जन र दुर्जन दुवैको जय होस् । सज्जन बाँचोस् सय वर्ष, दुर्जन बाँचोस् एक सय पचास वर्ष !